Vaovao - Masinina mamokatra Sodium Hypochlorite hisorohana ny fisorohana COVID-19
Ny angona farany navoakan'ny Ivotoerana Amerikanina misahana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana aretina amin'ny faha-5 dia naneho fa 106.537 tranga vaovao voamarina no notaterina tany Etazonia tamin'ny faha-4, nampisy avo vaovao amin'ny isan'ny tranga vaovao ao anatin'ny iray andro amin'ny firenena iray manerantany . Ny data dia mampiseho fa ny salan'isan'ny tranga vaovao tao anatin'ny iray andro tany Etazonia tao anatin'ny 7 andro lasa dia nahatratra 90000, izay nametraka indray ny firaketana ho an'ireo tranga vaovao avo indrindra tao anatin'ny iray andro tao anatin'ny 7 andro ny valan'aretina. Nisy 1.141 ny maty vaovao tamin'ny faha-4, ny avo indrindra hatramin'ny tapaky ny volana septambra. Ny valanaretina vao haingana tany Etazonia dia nihanahery vaika tokoa, niaraka tamin'ny tondro manan-danja toy ny isan'ny tranga vao voamarina, ny isan'ny tranga naiditra hopitaly, ary ny taham-pahafantarana ny fizahana viriosy manohy mametraka firaketana vaovao. Ny firongatry ny tranga vaovao dia tsy vokatry ny fitomboan'ny fitiliana. Na dia mitombo aza ny isan'ny fitsapana, ny fiakarana dia ambany lavitra noho ny fitomboan'ny isan'ny tranga voamarina.
Amin'ity toe-javatra ity, ny solosaina sodium hypochlorite solution desinfection dia ilaina amin'ny faritra maro sy maika.
Misy mpanjifa iray avy any Amerika nanafatra andiana milina mpamokatra sodium hypochlorite 3500litrs / andro avy amin'ny orinasanay, hihaona amin'ny takian'ny tsena any Amerika. Ny famolavolana, fanamboarana, fivoriambe ary fanoratana ireo fitaovana dia efa vita ary vonona ny hatolotra izao.
Ny vahaolana natetika novokarina dia azo ampiasaina amin'ny famonoana otrikaretina eny amin'ny arabe, fivarotana lehibe, trano, hopitaly, trano, rano fisotro, sns. Hamonoana ny viriosy ary hisorohana ny fivelaran'ny convid-19.
Hanampy ny mpanjifa hametraka ny fitaovana izahay ary hanampy ny mpanjifa hanomboka ny famokarana ny hafainganam-pandeha haingana ary hahazoana ny tsena fivarotana faran'izay haingana.
Miaraka amin'ny toe-javatra CONVID-19 ankehitriny, ny milina mpamokatra sodium hypochlorite dia ilain'ny firenena maro kokoa.
Sivana fanadiovan-drano Ro Well, Fomba fizotran-tany Ro, Sodium Hypochlorite System Design, Ranomasina mankany amin'ny masinina fisotro rano, Ro faritra sivana amin'ny rano, Rafitra fanivanana rano matihanina,